स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १९ जेठ २०७६)
बैंकले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १७ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । बैंकले शेयरधनीको बैंक खातामा उक्त नगद लाभांश जम्मा गरिदिएको छ । बैंकले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा रू. १ अर्ब ७३ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशत बढी हो ।
सो अवधिमा बैंकले रू. १ अर्ब ५५ करोड नाफा कमाएको थियो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । बैंकको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब पुगेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब १० करोड छ । एनएफआरएस प्रणालीअनुसार खुद नाफालाई विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर बाँकी रहेको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २८ शदमलव ८७, मूल्य आम्दानी अनुपात २० दशमलव ४७ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ७७ दशमलव १८ छ ।
2019-06-02 - 190 view(s) - abhiyan